Electronic Assembly Makambani - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Electronic Assembly Makambani - PCBFuture
Keywords: Pcb gungano makambani, pcb kugadzira, Dunhu redunhu gungano, PCBA sevhisi
PcbFuture yakavambwa muna2009.Iyo inogadzira pcb yekugadzira, gungano rePCB uye zvikamu zvekutsvaga. PCBFuture yapfuura ISO9001: 2016 mhando system, CE EU mhando system, FCC system.
Kwemakore, yakaunganidza huwandu hukuru hwePBB yekugadzira, Kugadzira uye kugadzirisa ruzivo, uye kuvimba nezviitiko izvi, zvinopa makuru masainzi ekutsvagisa masisitimu uye makuru uye epakati-epakati mabhizimusi vatengi vane imwechete-yekumira kugadzira, kutenderera, uye kukanganisa kwe yakakwira-kugona uye yakakwirira-yakavimbika yakawanda-yakaturikidzana mabhodhi akadhindwa kubva kumasampuli kuenda kumabatch Iyi mhando yebasa inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana senge kutaurirana, muchadenga uye kubhururuka, IT, kurapwa kwekurapa, nharaunda, simba remagetsi, uye chaiyo yekuyedza zviridzwa.
Chii chinonzi Elektroniki Gungano Makambani?
Magetsi makambani emakereke ari kuita bhizinesi rekugadzira uye kuyedza yakadhindwa wedunhu bhodhi magungano, tambo magungano, tambo maharusi, waya matambo uye akadhindwa wedunhu mabhodhi anoshandiswa zvemagetsi zvigadzirwa mune dzakasiyana maindasitiri. Nezvikonzero zvakawanda, zvinonyanya kubatsira kurega munhu wechitatu kuti agadzire zvinhu izvi.
Bhenefiti yemagetsi gungano kambani?
Makambani emagetsi emagetsi anopa mukana wekuchinja kumakambani madiki ane mashoma ekugadzira uye anoderedza nyaya dzevashandi. Uyezve, dhizaini yekambani yemagetsi ndeyekusimbisa hupfumi hwakakura, kusanganisira kugadzira, kutenga zvinhu zvakasvibirira, uye kugadzira zviwanikwa zvinosanganisira hunyanzvi hwekugadzira. Ivo zvakare vanopa kukosha-kuwedzerwa masevhisi senge ouinjiniya dhizaini, kugadzirwa kwemagetsi, kuyedza kushanda, masevhisi ekugadzirisa matambudziko uye kusangana kwepasi. Izvi zvinosunungura vatengi vasingade kugadzira uye kuchengeta hombe kuwanda kwezvigadzirwa. Nekuda kweizvozvo, vatengi vanogona kupindura kamwe kamwe mapikicha ari kudiwa nekukurumidza uye zvakanyanya kubudirira.
Nei uchisarudza yedu yemagetsi musangano musangano:
Mainjiniya ese ane anopfuura makore mashanu echiitiko chePCB.
Iyo fekitori yakarongedzwa nemhando dzakasiyana-siyana zvigadzirwa zvekugadzira
Vashandi vane zvakawanda zvakagadzirwa, kugadzirisa dambudziko uye kuongorora.
isu tine izvo zvinotora kuzadzikisa yako projekiti inoda kubva pane pfungwa kusvika mukugadzira uye zvakare ive yako izere yemagetsi mainjiniya shamwari zvisinei hombe kana diki chirongwa chako.
Isu tine hunyanzvi mune chitsva chigadzirwa sumo uye kuyera kusvika kuhuwandu hwekugadzira, tichitsigira iyo yese mutengi dhizaini kutenderera uye kusimudzira kwenguva yakareba kudyidzana.
1. RoHS inoenderana nePCB's.
2. RF pcb Kugadzira
3. Laser microvias, mapofu vias, akavigwa vias
4. Bare bhodhi kuongororwa kwemagetsi
5. PCB Impedance kuyedzwa
6. Nguva dzinokurumidza kutendeuka
7. Pamusoro pegomo tekinoroji
8. Thru-Hole Technology
9. Pcb nhema uye gungano
PCBFuture sevhisi inosanganisa izere mhinduro kubva dhizaini dhizaini, kune ekugadzira uye logistics zvirongwa. Iwo masevhisi anonyatso kukubatsira iwe kuti uwedzere kukwikwidza kwako, nekuenderana nenguva nevatengi rutsigiro, zvine hungwaru kudzora kwemhando, uye mutengo wakanaka, nenzvimbo dzakatsaurwa & dzakasarudzika dzekugadzira nzvimbo mune mutengo-unokwikwidza nyika.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, inzwa wakasununguka kubata sales@pcbfuture.com , isu tichakupindura iwe ASAP.